Basikety – «CCCOI 2017» : samy nandresy ny MB2All sy ny Ascut | NewsMada
Basikety – «CCCOI 2017» : samy nandresy ny MB2All sy ny Ascut
Manohy ny fahombiazany hatrany ny ekipa Malagasy, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCCOI), taranja basikety. Samy nivoaka ho mpandresy indray mantsy ny MB2 All sy ny Ascut.
Nitohy, omaly alatsinainy, teny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny andro fahatelo amin’ny fifanintsanana, hiadiana ny ho tompondakan ‘ny ranomasimbe Indianina, taranja basikety “CCCOI 2017”. Hatreto, mbola misongadina hatrany ny ekipa malagasy satria tsy misy mahatohitra azy, ireo ekipa vahiny mandray anjara, amin’ity.
Anisan’izany, ny nanamontsanan’ny MB2 All ny B Challenge avy any Seychelles. Nopotehin’ny MB2 All, tamin’ny isa mazava, 79 no ho 32 ry zareo Seiseloazy. Tsy niady mihitsy ny fihaonana satria toy ny nanaovan’ireo tovovavin’Analamanga, fanazarantena fotsiny. Nitarika an’isa hatrany ny MB2 All, tamin’ireo tapa-potoana efatra nilalaovana, tamin’ity fihaonana ity. Tombony ho an’ny mpilalao malagasy ny teknika nananan’ireo mpilalao tsirairay avy sy ny tanjaka miampy ny hafainganam-pandeha. Tsy nahita mangirana mihitsy ry zareo B Challenge, na teo amin’ny fanafihana na teo amin’ny fiarovantena. Lasan’ny MB2 All avokoa mantsy ny baolina.
Nahazo fandresena ihany koa ny Ascut Toamasina, sokajy lehilahy, raha nikatroka tamin’ny Beauvallon, Seychelles, izay misy an’i Danz kely. Lavon’ny Malagasy tamin’ny isa, 89 no ho 74 ry zareo, tamin’izany. Lehibe ara-batana ry zareo Seiseloà saingy noverezin-dry Tanjona sy ry Fataka, tamin’ny valim-panafihana.
Teo amin’ireo vokatra hafa, tafavoaka ho mpandresy, tamin’ny isa 73 no ho 55, ny Premium Cobra, ekipa faharoa an’i Seychelles, raha nifandona tamin’ny USONI basket avy any Kaomoro.